Madonna 'ọ dịbeghị mgbe ọ bụla ya na nwoke nwere obere amụ' - TELES RELAY
Madonna 'anọnyebeghị nwoke nwere obere amụ'
By TELES RELAY On Feb 13, 2020
Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara usoro iji mezie DNA nke ...
Akụkọ a sitere na etiti nke ...
Nkịta nwalere nke ọma maka coronavirus, mana ọ nweghị onye maara ...
Madonna na -eme oke ókèala rue mgbe ebighi ebi (Foto: Kevin Mazur / Getty Images maka dcp)
Madonna na-akpali ókè ahụ n'ihe ọ bụla ọ na-eme, nke ahụ gụnyere obere okwu egwu ya.
Ọ bụ ezie na imirikiti popstars na-ajụ ndị nọ na ndagide ahụ otú ha na-eme, ma ọ bụ nwee mmetụta uche banyere ọgba aghara ahụ, ma ọ bụ nwere ike ịkekọrịta oge na-eme ihere site na azụ, Madge na-atụle akụkụ ọmụmụ ya na ikike inwe mmekọahụ ya.
Onwere ihe kpatara ya bu eze nwanyi.
Nwa 61 afọ gbagburu obibi ya na London palladium na Wenezde n'abalị mgbe ọ gbasịrị manyere ịkagbu ihe ngosi mbụ ya na Mọnde n'ihi mmerụ ahụ, yana ikpe ikpe site na nyocha, ọ bụ ihe ịga nke ọma.
Madge nwere ebe obibi na London Palladium (Foto: PA)
Kaosinadị, ọ bụ mkparịta ụka Madonna n'etiti akụkọ ọdịnala ya na anyị chere na tiketi ahụ ruru ọnụ ahịa ya.
Dị ka Otu nwanyị na-amaghị nwoke gwara ndị mmadụ ere, 'Gịnị ka ị na-akpọ nwoke nwere obere amụ? Azịza ya bụ, Agaghị m atụfu eze. Anọtụbeghị mụ na nwoke nwere obere d ** k.
'Know mara ihe buru ibu, emela ka à ga-asị na ọ dịghị!'
Ọmarịcha ịma mma maka ọpụpụ nke Madge, gụnyere ndị bụbu di Sean Penn na Guy Ritchie.
Pọstit ahụ ejigideghị ndị na-akwado ya (Foto: Splash News)
Madonna chịkwara onwe ya ọchị mgbe a manyere ya ịnọdụ ala n'oche mgbe ọ merụrụ ahụ n'apata ụkwụ.
Ọ sịrị: 'Ọtụtụ mgbe, m na-egbu ikpere ihe dị ka nkeji iri abụọ ma ọ dị mma. Adị m mma na ya, n'ihi ya a gwara m. '
Ma mgbe isoro onye na-ege ntị kesaa biya biya, akụkọ ochie ahụ gbara mkpi wee sị: 'N'ebe ahụ ka ị ga-aga, anyị na-ekerịta ọrịa STD.'
Madonna kpebiri igosipụta ihe ọhụụ banyere ihe ochie ochie n'oge egwu ahụ, egwu sitere na album Madame X ya na-emejupụta ọtụtụ.
Agbanyeghị, ọ mere Vogue, American Life, Frozen na dịka Ekpere.
Ọ dị ka ọ họpụtara ka ọ bechapụ egwu anọ emere otu egwu - Chineke Njikwa, Ballet gbara ọchịchịrị, Ọdịdị mmadụ na gosipụta Onwe Gị - nke emere na ngosipụta ndị gara aga na-agbaso usoro iwu mgbochi elekere 11 nke London nke London.
Gbaanụ ntarama ndị ahụ.
Ihe ngosi Madonna na Palladium na-aga n'ihu ruo 16 nke February.
Enwere akụkọ akụkọ showbiz?
Y’oburu n’inwe akụkọ ama, vidio ma obu ihe osise metutara ndi otu ndi Metro.co.uk site na email anyi celebtips@metro.co.uk, na-akpọ 020 3615 2145 ma ọ bụ site na ịga Akwụkwọ Anyị Nyefee Ihe - anyị ga-amasị ịnụ gị.
ỌZỌ: A gwara Lewis Capaldi 'ị nwere ike ịga' site na nwanyị nke duhiere ya maka oghere nchekwa oche Grammys
ỌZỌ: Kylie Minogue yiri onye eti enyi ya nwoke Paul Solomons ihe n'ọfụma ọkụ ọhịa Australia
Isiokwu a pụtara na mbụ https://metro.co.uk/2020/01/31/madonna-never-man-small-penis-tells-audience-size-matters-12158547/
Ọrịa cancer nke Advanced Rush Limbaugh
Obodo 2020: nke a bụ ndị osote ndị ọdayo si 'ndepụta maka Segré-en-Anjou-bleu'
Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara usoro iji mezie DNA nke ndị mmadụ ...
Akụkọ a sitere na epicent nke oria coronavirus ...
Nkịta nwalere nke ọma maka coronavirus, mana ọ nweghị onye maara ihe nke ahụ ...